Usukumise amakhosi umdonsiswano wasendlunkulu - Ilanga News
Home Izindaba Usukumise amakhosi umdonsiswano wasendlunkulu
Usukumise amakhosi umdonsiswano wasendlunkulu
Agxeka ababangisa iMbube uMisuzulu esihlalweni sayo sobukhosi
ISISUKUMISE amakhosi indaba yomdonsiswano owenzeka eNdlunkulu kaZulu mayelana nesihlalo sobukhosi, asola abathile ngokuthi bafuna ukufeza izinhloso zabo ngaso (isihlalo), athi kodwa noma kunjalo, wona abambelentulo, iSilo uMisuzulu kaZwelithini kaBhekuzulu, yisona asaziyo njengomqaphi wesihlalo seLembe.
La makhosi avela ezifundeni ezahlukene KwaZulu-Natal, abenomhlangano oyinguyazana izolo ngeSonto eShowe, athi akekho umuntu oyowaguqula umqo-ndo mayelana nokuthi iSilo nguMisuzulu.
ILANGA elincinzwe indlebe ngalo mhlangano, lifike amakhosi abekhona ezwakalisa ukungenami ngalo mdonsiswano, athi ukumi-swa kwesabelomali esiqondene neNdlunkulu kaZulu kukhomba ngokusobala ukuthi uhulumeni unezinhloso zawo ngodaba lobu-khosi.
“Sihlangene lapha njengama-khosi akhathazekile ngesimo
esithinta isihlalo sobukhosi. Akekho ongazi ukuthi iSilo uMisuzulu samenyezelwa kubuka izwe lonke, futhi obaba bakhipha izinkomo ezahamba zayolobola uNdlunkulu Manftombi kaSobhuza, thina-ke sibambe lokho.
“Okuxakayo ngalokhu okuqhu-bekayo, ukuthi kulaba okuthiwa bayabanga, akekho noyedwa kubona oke waphumela obala, waveza ukuthi yena isihlalo ngesakhe. Lokho kukodwa kuchaza ukuthi kukhona abathile ababasebenzisayo, abafuna ukufeza izinhloso zabo.
“UMntwana uSimakade abanye abamphakamisayo, wabhala incwadi ezisholo yena ukuthi akekho embangweni wobukhosi, kwadlula isikhashana wabe eseshintsha, esethi uma kukhona abamuphakamisayo uzovuma.
“Kuyacaca ukuthi kukhona abamphusha ukuthi ashintshe lokho ayekushilo ngoba befuna ukufeza izinhloso zabo,” kusho enye yamakhosi ebikulo mhlangano.
Amakhosi agxeke abathi udaba lobukhosi luzosingathwa wumndeni, athi lokhu akusho ngoba wona awuhlaka olubalulekile lokwakhiwa kobukhosi baKwaZulu.
“Njengoba singamakhosi nje, cishe iningi lethu lahlala esihla-lweni kuvele kukhona abomndeni ababengahambisani nakho ngoba bethi isihlalo ngesabo, lokhu kuyasho ukuthi vele emndenini kuyohlala kukhona ukuphikisana,” kusho enye inkosi.
La makhosi ancome ozakwabo baseMkhanyakude ngokweseka umcimbi obungoMqibelo eNgwavuma, wokugubha iminyaka ewu-37 kwabakhona uMkhosi woMhlanga, yize uhulumeni ungazange ulekelele.
“Njengoba uhulumeni uvale isabelomali, kuyasho ukuthi nawo unezinhloso zawo ngoba sagcina umemezele ukuthi ulinde amami-nithi omhlangano owawusendlunkulu. Kasazike ukuthi ukuvala isabelomali kwenziwa yini,” kusho enye yamakhosi.
USihlalo weNdlu yabaHoli bo-Mdabu KwaZulu-Natal, iNkosi Phathisizwe Chiliza, ithe noma ibingawazi lo mhlangano wayizolo, kodwa iyazi ukuthi kunemvunge emakhosini, athi asekhathele wukulinda indaba yasendlunkulu.
“Njengamanje ngeke kube khona umuntu esimkhomba ngenjumbane sithi nguyena oyimba-ngela yakho konke lokhu, kodwa sithi indlunkulu mayihlale phansi, izibheke, bese ikhipha indlela eya phambili.
“Kungenzeka sibuke kude kanti umkhonto usendlini.
“BengiseNgwavuma ngimenywe ngamakhosi aseMkhanyakude eyokwamukela iSilo (uMisuzulu) emkhosini owandulela owoMhlanga ozoba ngesonto elizayo, amakhosi ayacacisa ukuthi wona abambe elentulo elamenyezelwa kuqala.
‘Ayacacisa futhi ukuthi kawaphikisani nokuthi kube nezingxoxo eziqhubekayo emndenini, kodwa kumele nawo umndeni ungakho-hlwa ukuthi isakhiwo sesizwe esibalulekile, ngamakhosi.
“Indlunkulu mayixazulule izi-nkinga zayo kungaze kubizwe amakhomishini ngoba lokho kuyothatha iminyaka,” kusho iNkosi Chiliza.
UMntwana uThulani – owayekhulumela iSilo uZwelithini – ushaye ngamafuthi wathi amakhosi anelungelo lokuzwakalisa uvo lwawo.
“Amakhosi aqinisile uma ethi uhlaka lwawo yilona olubalulekile esakhiweni sobukhosi baKwaZulu. Engingakusho okuphathekayo wukuthi udaba lusingethwe uhulumeni njengamanje, sizolinda wona sizwe ukuthi uthini,” kusho
Imizamo yokuthola uMtwana uMbonisi – okuvame ukubonakala engahambisani neSilo esikhona – iphunzile, ucingo lwakhe belukhala lungangeni.
UMntwana uThembi – ovame ukubonakala noMntwana uMbonisi – uzanyiwe kodwa osondelene naye wathi uyagula, usesimeni esibucayi kakhulu.
Previous articleUPHUME NGOSHWELE UZUMA EJELE
Next articleWINA!!! Spring Reader Promotion